Sida loo soo gudbiyo qoraalka ku iPhone iyo Android
Ma haysaa ah fariimaha qoraalka ah oo muhiim ah si aad iyo aad u rabto in aad u gacangelisid inay la saaxiibadaa ama shaqaalaha? Waxa ugu cad aad sameyn doonaa isku dayayso in ay nuqul oo paste ama u -isticmaale. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hab sahlan ee sms u gudbinta loo eegin isticmaalaya iPhone ama telefoonka android. Si fudud u saaray, fariin qoraal ah weeraryahanka kaliya in qofka loogu tala galay.
Qaybta 1aad: In loo sahlo text fariin soo gudbiyo si aad u hesho una dir farriimaha ee iPad iyo Mac
Qeybta 2: Sida loo gudbin qoraalka telefoonada Android
Qeybta 3: Talooyin Bonus ah ee Android iyo macruufka SMS Management
Sii wax yaabahan gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad ka jawaabto taleefan oo ku saabsan nidaamka ka hawlgala iPhone, iPad, iyo Mac sida Yosemite. Habkaani wuxuu ku siinayaa khibrad waarta marka la isticmaalayo qalabka kala duwan. Feature text Forward ayaa dhanka kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u gudbinayaan fariimo qoraal ah, emails in labo ka mid ah shaqsiyaadka aan u baahan ee si dhab ah Confirm. Waxa badbaadiyay aad xiiso qoraalo Confirm waqti iyo.
Kuwa soo socda waa tallaabooyin muhiim ah in ay ku hagaan suuragelinayo fariin qoraal ah u gudbinta on your iPad iyo Mac
Step1. Fur app Fariimaha ku saabsan Mac
Wax First hore, si loo hubiyo in Mac iyo iPad waa in anfacaya ujeeddo ah fulinta inta kale ee nidaamka. Xaqa ka PC Mac furo app Messages . Waxaad awoodi doontaa in aad aragto suuqa kala taas oo u eg tan.
Step2. Settings Open on your iPad
Laga soo bilaabo aad iPad furo Settings app, ka dibna uu dedeg Messages. Under tuubada fariin icon ku Text fariin gudbinta.
Step3. Hel magaca Mac
Laga soo bilaabo aad iPad, tag Settings Message Text oo la helo magaca Mac ama macruufka qalabka aad rabto in aad awood, si ay u helaan, oo soo dirin fariimo. Tubada badhanka ku saabsan dhinaca kore ee midig ee shaashada. Sida aad hore u ogeyd, marka feature ah waa "ON" waxa ay ku tusaysaa midab cagaar ah. Muuqaalka in uu yahay "off" muujin doonaa midab cad.
Step4. Sug suuqa kala pop up a
Laga soo bilaabo aad Mac sugi daaqad oo u baahan in aad geli furaha ah soo bandhigay ah. Waxa kale oo jira ah mana arkin sanduuqa wadahadal haddii aadan ka arki kartaa xeerka. Haddii aadan helin fariin qoraal ah oo leh xeerka, fadlan retry diraya.
Step5. Ku qor code
Laga soo bilaabo aad iPad geli furaha qoran (lix tirada lambar) iyo garaac ogolow si aad u buuxiso nidaamka.
Your Mac xaqiijin doonaa xeerka iyo iPad iyo Mac hadda xiriiri karaa iyada oo lagaala ee fariimaha qoraalka ah ee ka dhexeeya labada qalabka. Dhamee habka adigoo gujinaya ogolow button. Ha isku buuqo la diro fariimaha qoraalka ah, uu raaci doonaa habraaca ku xusan oo ku saabsan sida aad u heli fariimaha qoraalka ah ee ipad iyo qoraallada diraya noqon doontaa mid ka xiiso leh ka badan sidii hore.
< Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - macruufka Message Recovery
Sida aad ku aragteen kor ku xusan qoraalka lagaala aad iPhone waa wax fudud oo toos ah. Waxaa intaa dheer in ay u gudbinayaan fariimo qoraal ah Android phone waa hab fudud. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ku hogaamiyay in ay kaa caawiyaan in aad ka shaqeeyaan in.
Step1. Tag Messages menu
Dul in aad Message menu ka telefoonka aad android iyo aqoonsado fariin aad rabto in ay u gudbinayaan.
Step2. Tubada iyo qaban fariinta
Tubada iyo qaban fariin ilaa midab ah hurdi uu ugu qoran shaashada fariin.
Step3. Sug screen pop up a
Continue haysta farriimaha muddo ka badan laba ilbiriqsi ilaa daaqad ka muuqataa xulashooyinka kale oo cusub
Step4.Tap on Forward
Dooro Forward ka pop daaha cusub oo ay bilaabaan ku daray tiro aad rabto in aad si aad u gudbinayaa fariin. Waxaad ku dari kartaa tiro ka mid ah liiska xiriirka, liiska ay dhawaan ama gacanta iyagoo aad ku dartid. Ka dib markii ay ku daray qaata oo dhan, garaac Send sanduuqa wadahadal. Our fariin loo soo diri doonaa iyo haddii aad diro ama la helo xaaladda fariin feature waxaa u suurta waxaad heli doontaa warbixin bixinta ah.
Haddii xaaladda warbixin gaarsiinta waa naafo, waxa kale oo aad isticmaali kartaa View faahfaahsan fariin doorasho si aad u ogaato haddii aad farriin la gaarsiiyey meelahii loogu talo galay.
# 1.Delete Old Text Messages toos ah
Inta badan, annagu waan xajinnaa fariimaha qoraalka jir telefoonada naga Android. Kuwaas oo keliya waa junks oo ay kor loo qaado meel qiimo leh oo ku saabsan qalabka our. Waa caqli leh in laga takhaluso fariimaha qoraalka ah oo dhan ay si fudud u dejinta telefoonka si toos ah iyaga tirtirto ka dib markii dhihi 30 maalmood, sannad ama si.
Nidaamku wuxuu yahay sahlan yahay waad qiyaasi kartaa. Laga soo bilaabo aad Menu button of telefoonka aad Android, garaac Settings dooro goobaha Guud . Markaasuu iska on jir ah fariimaha Delete sanduuqa wadahadal iyo ugu danbayntii dooro waqtiga takhaluso farriimaha jir ah.
# 2.Find Out Marka SMS la diray ama la helay
Awoodda si loo hubiyo xaaladda fariimaha qoraalka ah waa mid aad u muhiim ah. Habkaani waa wax caadi ah in telefoonka caadiga ah. Marka ay timaado in Android phone, aad leedahay si ay awood habkaani maadaama ay tahay Disable by default. Ka dib kor ku saabsan xaaladda ay farriimaha aad idinka Koriya xanuunsan badan ee welwelo in fariinta la gaarsiiyey ama aan. Waxaa ka dib diraya fariin in aad heli doontaa ogeysiis ah in aad fariin ayaa si ammaan ah loogu gacangeliyey. Tani waa uun shaqada labaad.
# 3. sahlo iyo Disable Higgaad saxe
Telefoonada Android bixisaa feature isa sudhsudhan joogay by default. Marka isa sudhsudhan joogay waxaa u suurta waxay hoosta ka xariiqeen xubno kala duwan oo aad script. Tani waxay u noqon karaan in wax aad looga xumaado gaar ahaan marka aad qortid aad wadahadal laba luqadood oo kala duwan oo aad shuqulkaaga oo dhan waxaa ka buuxa khadadka casaan. Kooxda ifaya waa in ereyga sax ahayn Ingiriisi waxaa la qorayaa oo aad markaas u saxno. Taas ayaa ka dhigaysa mid aad sax u shaqadaada.
Arrinta gunteedu waa in aad sidoo kale awood karo ama gab aad isa sudhsudhan speller ku xiran tahay waxa hoosaadyo taam la joogo.
> Resource > Android > Sida loo soo gudbiyo qoraalka on iPhone iyo Android